के चाल परेर हो कुन्नि मन्त्रीहरू फेरिन यसपालि अलिक ढिलो भइसक्यो । दुईदुई महिनामा फेरिनु पर्ने हो ।
HomSuvedi — Sat, 08/24/2013 - 06:48
मधुवनमा राधिका नाचे रे को लयमा
कान्तिमुरीमा प्रचण्ड नाचे रे नाचे रे नाचे रे
चलचित्रकर्मी महिलासँग कम्मर भाँचे रे भाँचे रे
नेपाललाइ नै धुजा धुजा पारे पनि
आफू भने आनन्दका साथ बाँचे रे बाँचे रे बाँचे रे
धुन धनननननननन तिरिकिटीधुम ताताधिरी तथै तथै
सारे गम पध निसा गमपधरे निसा
आहाहाहा हा हा ..............
शास्त्रीय सङ्गीतमा बोल थोरे हुने हुँदा यहाँ पनि बोल थोरै छ ।
HomSuvedi — Thu, 08/22/2013 - 20:40
साउनको पहिलो हप्तामा नेपालका संचार माध्यमबाट नेपाली युवाहरू विदेका कति छन् भन्ने कुराको खबर प्रसारण भएको छ । नेपालबाट प्रति दिन औसत ४०० युवाहरू विविध कारणले स्वदेश छाडेर विदेशिंदै गरेको तथ्याङ्क अघि आएको छ । आजकै मितिमा हेर्दा पनि युवायुवतीहरू नभएको मुलुकका रुपमा नेपाल देखिन थालिसकेको छ भने यही अवस्था रहे केही वर्ष पछि नेपालमा युवायुवतीको अनिकाल लाग्ने कुरा पक्का भयो ।
HomSuvedi — Sun, 08/18/2013 - 07:50
आमा केही वर्ष भाइको बिहे नगरिदिनु होला
गरिहाल्नु भयो भने
उसका पनि छोराछोरी हुन सक्छन्
तिनलाई हुर्काउनु पर्छ
तिनलाई पढाउनु पनि पर्छ
तिनलाई विद्यालयमा भर्ना पनि गर्नु पर्छ ।
भर्ना गर्नासाथ के हुन्छ आमा तपाईंलाई थाहा छ ?
HomSuvedi — Sat, 08/17/2013 - 07:51
कुर्कुरे जब ममाथि चढेथ्यो, भीडभाडतिर ध्यान बढेथ्यो ।
ढेस्सिएर हुलका वीच छिर्न, आँट भित्रतिरबाट बढेथ्यो ।।
खाइ सार कि त लाइ छ सार, लम्पसार परी मर्नु धिकार ।
भित्र मन्त्र यही थ्यो उति बेला, आज पर्न म पुगें अब फेला ।।
धर्म गर्न मन यो किन जान्थ्यो, तै पनि भिडतिरै मन हुन्थ्यो ।
भीरभाड जहीं नित्य रहन्थ्यो, लौ त्यतै तिर पुगौं मन हुन्थ्यो ।।
गल्ली मात्र तिर यो कति चर्नु, घाँस चोकरहरु कति छर्नु ।
यो कुरा जब चल्यो मन भित्र, झन् परें म त बडो अलपत्र ।।
भीडभाडतिर भित्र पसेर, ठेलठाल गरी ठाउँ चुनेर ।
बस्न आतुर सधैं मन हुन्थ्यो, भित्री पीर मनको कुन सुन्थ्यो ?
बालकैमा वृद्धको मृत्यु
HomSuvedi — Sun, 08/04/2013 - 06:35
अति चाकरी पाएर पनि मेरो बगै‌चाको बूढो रुख मर्यो जो बालखै थियो ।
Biju Subedi — Mon, 07/22/2013 - 11:27
मेरो एकजना अति नै मिल्ने सुरेश हमाल नाम गरेको साथी थियो । हामी स्कूल पढ्दादेखिका साथी थियौं । हामी दुइको रोल नंबर पनि स्कूलमा सधैं एक अङ्कले मात्रै फरक हुन्थ्यो त्यसैले पढ्नमा पनि हामी बीच निक्कै प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो । समयको अन्तराल सँगसँगै उसले क्याम्पस पढ्ने समयमा लभ गरेर बिहे गर्यो ।
केही समयपछि उसले एउटा छोरो पनि जन्मायो । ऊ यत्ति खुशी भएको थियो कि त्योभन्दा अगाडि ऊ त्यत्ति खुशी भएको मैले कहिल्यै देखेको थिइन ।
Biju Subedi — Sat, 07/20/2013 - 09:31
एकजना मानिसको बिचार परिवर्तन भयो र ऊ नास्तिक भयो । उसलाई आफू नास्तिक हुनुभन्दा अगाडि धेरै धर्म गरेकोमा पछुतो लाग्यो । त्यसैले उसले अहिलेसम्ममा धेरै पटक मन्दिर घुमिसकेको धर्मलाई कसरी निमिट्यान्न पार्ने भनेर उल्टोबाट मन्दिर घुम्न थाल्यो ।
उतातिर भगवान भने आफूले वरदान दिने मानिस कोही फेला नपरेकोमा बहुलाइरहेको थियो र प्रश्न गरिरहेको थियो कि “किन मानिसहरू एकाग्र भएर मेरो भक्ति गर्दैनन् ?”
Biju Subedi — Sun, 06/30/2013 - 23:07
Biju Subedi — Sat, 06/29/2013 - 15:49
असार पन्ध्र रमाऔं आज हिलोमा मैलोमा
डुबाई हात डुबाइ खुट्टा हाँसेर रमेर
छ्यापेर हिलो हल्लाई शिर कम्मर मर्काई
छुपुमा छुपु रापेर धान नाचेर गाएर
चिउरा दही मुछेर खाई आजको दिनमा
खेताला सबै किसान सबै आजको दिनमा
विभेद छैन बिमति छैन रमेको दिनमा
कोरेको मैले असारे छन्द आजको दिनमा
Biju Subedi — Wed, 06/19/2013 - 14:10
आफ्नो दाजुभाइबाट आफ्नो बचेखुचेको जग्गा अंश भागवण्डा गरेर छुट्टिएपछि बिचरासँग एक कौडी पैसा पनि बचेको थिएन । उसले आफूसँग भएको खेतको माटोको इँटा बनाएर र त्यही माटोको लेप बनाएर उसले पहिले घर बनाएको थियो । तर त्यो घर अहिले निकै थोत्रो भइसक्यो ।
उक्त घर बनाउँदादेखि नै भत्काउनुपर्छ र त्यसको ठाउँमा अर्को घर बनाऊ भनेर सल्लाह दिने जोसुकै देखि उसलाई उत्पात रिस उठ्थ्यो ।
Biju Subedi — Mon, 06/10/2013 - 12:42
मितिः– २०७० जेष्ठ २७ गते सोमबार बिहान ४ बजे
प्यारो साथी !
प्यारो साथी ! मलाई तिम्रो सम्झना आइरहन्छ । तिमी साँच्चिक्कै मेरो साथी बनेर उभिरहेका छौ मेरो निम्ति । तिमीलाई भेट्न त सकिएको छैन तर एकपटक भेट्ने मौका आएर पनि मैले भेट्ने मौका गुमाइसकेँ । फेरि भेट्ने मौकाको प्रतिक्षामा छु । हुन त तिम्रा कुराहरू सबै मलाई मन पर्दैनन् तर पनि मलाई सबभन्दा मनपर्ने मित्र तिमी भएका छौ ।
धर्ती–आमा र म
Biju Subedi — Wed, 05/29/2013 - 13:08
हे धर्ती–आमा ! हे मेरी आमा
हे आमा मलाई चाहिन्छ आशीर्वाद
किन जाने चारधाम
नजिकको आत्मा देवतालाई हेला गर्दिन म
तिमी मेरो धर्तीं आफ्नै देवता हौ
तिमी मेरी जननी, मेरो टेका स्थान हौ
तिम्रा सन्तानहरू किन ठूला साना छन्
Biju Subedi — Fri, 04/12/2013 - 16:38
म एउटा तिम्रो रोबोट
अरूहरू पनि त्यस्तै म जस्तै रोबोटहरू
म एउटा रिमोटबाट सञ्चालित
किनकी मेरो दिमाग रिमोटबाट सञ्चालित छ
मेरो दिमाग कुनै मनुवाले भनेको मान्दैन
तर पनि मेरो दिमाग मेरो वशमा छैन
कसैले भनेको नमान
आफुलाई भित्रबाट जे लाग्यो त्यो गर भन्छ
तर आफ्नो दिमाग तिमीबाट सञ्चालित छ
हो दिमाग रिमोटबाट सञ्चालित छ
त्यो रिमोट दबाउने को हो ?
त्यही रिमोटले कसैलाई तिमीले असल बनाइदिन्छौ
त्यही रिमोटले कसैलाई तिमीले खराब बनाइदिन्छौ
त्यो रिमोट दबाउने तिमी भगवान हो ?
भगवान हो भने किन पाप बढेको ?
के पाप बढाउने तिमीलाई अधिकार छ ?
के पाप बढाउने तिम्रो कर्तब्य हो ?